Iyo Yakanakisa iPhone XS Screen Vadziviriri Muna 2019 - Payette Pamberi - Iphone
Ini ndinoshandira vasina magwaro muMiami
iphone wont inobata mari uye inopisa
inoita garandi yeapuro inovhara kukuvara kwemvura
Iyo Yakanakisa iPhone XS Screen Vadziviriri Muna 2019
Iwe uchangowana iyo nyowani iPhone XS uye iwe unoda kuichengeta iri yakanaka mamiriro. Muchengeti wechidzitiro inzira inodhura yekuchengeta yako nyowani iPhone inoratidzira mune yakakwana chimiro. Muchinyorwa chino, ndicha tsanangura kuti nei iyo iPhone XS inoratidzira yakakosha uye ichikubatsira iwe kuwana akanakisa ekuvharira screen kune yako iPhone XS !
Chii chinonzi Screen Protector?
Mudziviriri wechidzitiro chidimbu chepurasitiki kana girazi rakaiswa rakanangana pamusoro pechiratidziro chefoni yako kuvhara nekuchichengetedza kubva mukukuvara. Mudziviriri wechidzitiro haagone kudzivirira kupaza kana ukadonhedza foni yako.
Zvisinei, inodzivirira kuratidzwa kwefoni yako kubva mukukwaya, izvo zvinogona kuitika kazhinji kupfuura zvaunofunga. Yakawanda yenguva, skrini dzinogona kukwenya kana iwe ukaisa foni yako muhomwe imwechete seyako makiyi emota kana yakasununguka shanduko.
Nei Ndichifanira Kuwana Screen Screen?
Nekufamba kwenguva, kuratidzwa kweApple kwave kuomarara zvakanyanya. Muchokwadi, mazhinji emazuva ano mafoni emafoni ane ekuratidzira anokwanisa kuramba akakwenenzvera kubva kuzvinhu zvakaita semakiyi emakiyi uye akasununguka shanduko. Nekudaro, izvi hazvireve kuti kuratidzwa kwe iPhone yako hakuverengeke.
Muchengeti wechidzitiro anopa yako iPhone imwe yekuwedzera dziviriro kuitira kuti iwe ugone kuidzivirira kuti irege kuwana makwikwi asina basa. Kana muchengeti wechidzitiro akakwenenzverwa, unogona kugara uchibvisa chidzitiro uye wochitsiva nechimwe chitsva. Izvo zvakachipa kwazvo kutsiva chinovhara chidziviriro pane iyo iPhone XS kuratidza!
sei wont yangu iphone 6 backup
Chii Chakakosha Nezve Iyo iPhone XS Ratidza?
Iyo iPhone XS inoratidzira ndeyechokwadi zvisingaite, saka hazvishamise kuti iwe ungade kuichengetedza yakachengeteka nemudziviriri wechidzitiro. Iyo iPhone XS ine 5.8 ”skrini ine ese-skrini kuratidza. Inozvirumbidza 2436-na-1125 pixel resolution ine 458 pixels pa inch (ppi). Kuenzanisa, iyo iPhone 8 ine 4.7 ”skrini ine 1334-na-750-pixel resolution pa326 ppi.
Iyi iPhone inoratidzira yakanaka girazi inoratidzira. Apple inoti girazi iri ndiro rakasimba kupfuura nakare kose rakashandiswa mu iPhone. Yakagadzirirwa kudzivirira yako iPhone kuratidza kuti isaputsike kuita gumi nezvidimbu zvidimbu kana iwe ukazvidonhedza, asi hazviparara.
Pakupera kwezuva, girazi igirazi. Yako iPhone XS inoratidzira inogona kukwenywa nyore kana ukasashandisa dziviriro yechidzitiro. Pazasi, isu tinokurudzira vamwe vakanakisa iPhone XS screen vadziviriri ve2019!
Iwo Akanakisa Screen Anodzivirira Eiyo iPhone XS
Kutsvaga yakavimbika iPhone XS dziviriro yechiso kunogona kuve kunotyisa. Pane zviuru yemhedzisiro yekusefa kuburikidza neAmazon chete.
Panzvimbo pekukuita iwe kuti upfuure neiyo inonetesa maitiro, isu tawana mashanu akanakisa ekuchengetedza macomputer ayo isu tinoziva achachengeta yako iPhone XS iri mune yakanyanya mamiriro!
iphone 5c mutauri haishande
SPARIN Yakadzikama Girazi Screen Dziviriro
Aya mana-mapakeji evanodzivirira screen anowanikwa chete $ 6.99 chete. Yakagadzirwa ne9H kuomarara girazi, iyo Sparin Yakatsamwa Girazi Screen Dziviriro inorema zvakapetwa katatu kupfuura zvakajairwa screen screen. Iyo zvakare yakasviba-yakatetepa uye ine isina mwero shanu-nyeredzi chiyero paAmazon.
Simba Redzidziso Girazi Screen Screen Dziviriro
Iyo Simba Redzidziso Girazi Screen Screen Dziviriro ndeimwe 9H-yakayerwa yakaoma girazi nhoo yekudzivirira chidzitiro yakagadzirirwa iyo iPhone X uye XS. Iyo inouya neyekugadza chishandiso kit yekubatsira iwe kuti ushandise iyo skrini yekudzivirira zvakakwana pane yako iPhone's kuratidza. Ichi chinovhara chinodzivirira chinouyawo neakasarudzika kuchenesa kupukuta uye yehupenyu garandi
Iyo Maxboost Yakadzikama Girazi Screen Dziviriro ine chirevo chakakosha chekurumbira - ndeimwe yepasi pasi pevacheche vadziviriri vechidzitiro, pa0.25 mm (mazhinji macomputer vadziviriri ari 0.3 mm akaonda). Kutenga kwako kunosanganisira vatatu vekudzivirira skrini, furemu yekumisikidza, uye waranti yeupenyu!
Trianium Screen Mudziviriri
Iyo Trianium Screen Mudziviriri inowirirana nehuremu hweutete hweMaxboost chidzitiro chekudzivirira pa 0.25 mm. Iwe uchagamuchira vatatu vekudzivirira sikirini, yekutsvaira yekupukuta, yekumisidzana furemu, mushandisi gwaro, rinobvisa guruva, uye warandi yewarandi kana iwe ukatenga ichi chigadzirwa kubva kuTrianium.
Isu hatisi isu tega tinokurudzira ino yekudzivirira skrini kune yako iPhone XS. Ichi chigadzirwa chine 4.5 nyeredzi chiyero chakavakirwa pane angangoita zviuru zviviri zveAmazon ongororo!
JETech Screen Mudziviriri
Iyi mbiri-pack ye iPhone XS inodzivirira screen kubva kuJETech icharatidza kuve yakasimba neayo 9H yakaoma girazi dhizaini. Kana iwe uchitsvaga wakakora screen muchengeti, ichi ndicho chigadzirwa chako!
Vadziviriri ava 0.33 mm gobvu uye vanopesana nemabhuru, guruva, uye zvigunwe. Iyo yekutengesa package inosanganisira yekuchenesa jira, guruva kubvisa tsvimbo, yekuraira gwara, uye yehupenyu waranti.
maitiro ekubatanidza iphone 6 nemota
Chidzitiro Chako Chakachengeteka!
Parizvino, iwe unofanirwa kuve nekunzwisisa kwakanaka kwekuti chii chinovhara muchengeti uye kuti munhu anogona sei kubatsira yako iPhone XS. Tinovimba chinyorwa ichi chakakubatsira iwe kuwana yakanakisa iPhone XS yekudzivirira sikirini pamutengo unodhura. Ndokumbira utaure pazasi uye tizivise kuti ndeupi muchengeti wechidzitiro waunokurudzira iyo iPhone XS!